Eoropa Afovoany & Atsinanana · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Afovoany & Atsinanana · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Eoropa Afovoany & Atsinanana tamin'ny Marsa, 2012
Rosia: Ny Fiainan'ny Silamo Ankehitriny Ao Mosko – Ny Zava-misy
Rosia 31 Marsa 2012
Ny fitomboan'ny mponina silamo ao Moskoa dia maneho ny lalana izoran'ny foko sy finoana Rosiana eo anivon'ny tantara sy zava-nisy izay nanova ny fijerin'ny Rosiana sy ny fandraisany ny vahiny, izay namolavola ny fomba teo amin'ny fiarahamoniny sy ny politikan'ny governemantany ankehitriny momba azy ireny
Lahatsary Gafin'ny “Fifandonan'ny Riba” Navoakan'ny Vondrona Eoropeana
Eoropa Andrefana 23 Marsa 2012
Nisy lahatsary natao ho an'ny tanora efa lehibe nangala-tahaka ny sarimihetsika Kill Bill ary miompana amin'ny "fifandonan'ny riba" nataon'ny Vondrona Eoropeana entina hivelaran'ny Firaisambe Eoropeana. Saingy nesorina ny lahatsary ny 6 Marsa 2012 rehefa niteraka adihevitra mafana noho ny fiampangana azy ho mampiroborobo ny fanavakavaham-bolonkoditra.
Makedonia 18 Marsa 2012
Makedonia: Mitohy Misondrotra Ny Vidin-tsolika
Amerika Avaratra 15 Marsa 2012
Ny fisondrotana tsy mitsahatry ny vidin-tsolika no anton'ny olana maro ho an'ireo vahoaka ao Makedonia, ary ny sasany tsy misalasala miresaka ilay fihenjanana anaty hanihany
Rosia 14 Marsa 2012
Toa nanjavona ireo tovovavy niantso sy nanentana mba hiboridana ho an'i Putin tamin'ny fahavaratra lasa teo. Koa satria efa hifarana ny fotoam-pifidianana any Rosia, ndeha asiana topi-maso kely ny fomba nivoaran'izany fihetsiketsehana izany, sy ny fomba nampirisihany ireo vehivavy hafa - na manohitra an'i Putin na momba azy - hanana saina mpamorona.
Rosia: Fomba fijerin'ny Mpiblaogy ny Minitra Farany Alohan'ny Fifidianana
Rosia 08 Marsa 2012
Ny fifidianana filoham-pirenena ny Alahady dia mifangarika tanteraka tamin’ny fifidianana an’i Vladmir Putin voalohany tamin’ny taona 2000, raha foto-kevitra tokana nijoroany ny ady amin’ny fampihorohorona any amin’ny faritra avaratra Caucasus. Donna Welles dia nanome Fomba fijerin'ny Mpiblaogy ny Minitra Farany Alohan'ny Fifidianana.
Eoropa Andrefana 05 Marsa 2012
Ny fanetsehana ny mpiondana aterineto hanohitra ny ACTA, ny fifanekena ara-barotra manohitra ny fakan-tàhaka dia samy tsy mihalefy raha toa kosa ny PArlemanta Eraopeana tsy maintsy niatrika ny fndinihana ireo tolo-dalànanandritra ny fivoriany tao Strasbourg tamin'ny herinandro lasa. Ny fanamafisana dia nahemotra eo am-piandrasana izay ho fanambaràna avy amin'ny Fitsarana Eraopeana mikasika izay mampifandraika azy na tsia amin'ireo lalàna fototra.
Rosia: Ankamantatra alohan'ny Fifidianana ao Vladivostok
Rosia 04 Marsa 2012
Mialoha ny fifidianana filoham-pirenena rosiana amin'ny 4 Martsa izao, mafampana tanteraka ny rivo-politika. Sady odian'ny manam-pahefana Rosiana fanina ny fisian'ny fihetsiketsehana goavana manerana ny firenena, no tsy mamaly araka ny tokony izy ny fitakian'ny vahoaka izy ireo. Lasa resa-politika avokoa ny ataon'ny tsirairay sy ny zava-drehetra ankehitriny, tratran'izany rivo-politika mafana mialoha...
Makedonia: Mitohy Ny Raharaham-Panarahamaso Ny Fahalotoan-dRivotra ao Skopje
Makedonia 03 Marsa 2012
Nandray fepetra tamin'ny tsy fisian'ny rafi-pandrefesana ny taha-pahadiovan'ny rivotra an-tserasera ao Skopje tamin'ny alalan'ny famoahana saripika eo amin'ny bolongana ny ONG Greenbox. manoratra momba ity fanapahan-kevitra ity i Filip Stojanovski.
Global Voices Podcast: Mahatsiaro Ireo Androntsika Tany An-tsekoly
Afrika Mainty 03 Marsa 2012
Ato anatin'ity famoahana ity isika dia handeha ho any an-tsekoly. Miainga amin'ny fanabeazana henjana be any amin'ny Reniranon'i Niger, ary hatramin'ny fisaintsainana ny sasany amin'ireo fotoana mamy sy tsy hay hadinoina indrindra tamin'ny fotoana nandratoan'ireo mpandray anjara manerana izao tontolo izao ato amin'ny Global Voices fanabeazana. Kadoa: Ny fomba nahaizan'i Ethan nitendry haingana be.